Jawaano Qaad ah oo uu Lahaa Ganacsade Ina Jabuutaawi oo Lagu Gubay Bosaso | SAHAN ONLINE
Jawaano Qaad ah oo uu Lahaa Ganacsade Ina Jabuutaawi oo Lagu Gubay Bosaso
BOOSAASO –Ciidamada Ilaaliya kontoroolka magaalada Boosaaso ayaa dab qabadsiiyay ilaa 14 jawaan oo maandooriyaha qaadka oo uu lahaa Ganacsade Maxamed Cabdiraxmaan Caraale oo loo yaqaan Jabuutaawi sida ay Sahanonline u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoonyahay.
Qaadkan oo sida la sheegay maalintii labaad laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Badhan ee gobolka Sanaag ayaa baabuur lagu soo galiyay magaalada Bosaso oo qorshuhu ahaa in lagu iibiyo, hase yeeshee ciidamada ilaalada kontoroolka ayaa qabtay, kadibna gubay.
Saraakiisha Booliska gobolka Bari ayaa Sahanonline u sheegay in amarka lagu gubay qaadka uu ka yimid dhinaca dowladda Puntland, waxayna ka gaabsadeen inay faahfaahin dheeraad ka bixiyaan. Diyaarada qaadka keentay ayaa la sheegay inay ruqsad ka haysatay dowladda federaalka Soomaaliya.
Ganacsade Maxamed Cabdiraxmaan Caraale oo loo yaqaanJabuutaawi
Sahanonline oo xog-waraysi la yeelatay qaar ka mid ah ganacsatada qaadka ku iibiya Bosaso, waxay sheegeen in jawaanada la gubay uu lahaa ganacsade Ina Jabuutaawi, oo xaruntiisu tahay magaaladda Laascaanood, waxaana la wadaago nin kale oo magaciisa lagu soo koobay Jaamac oo ka soo jeeda gobolka Sanaag.
Ganacsade Ina Jabuutaawi waxaa uu hore uga mid ahaa ganacsatada qaadka Miirowga ee laga keeno Kiiniya,lagana soo dejin jiray Garoonka Cabdullaahi Yuusuf ee Magaalada Galkacayo, balse markii dambe wuxuu u wareegay Magaalada Laascaanood , ka dibmarkii uu la heshiiyay maamulka Somaliland, qaadka ka soo dega laascaanoodna wuxuu u soo iibgayn jiray Caasimadda Garoowe iyo degaamo kale.
Qaadka Miirowga ee laga cuno goboladda Bari iyo Karkaar waxaa laga soo dejiyaa Magaaladda Qardho ee Karkaar, iyadoo dowladu ay canshuur ka qaado qaadkaas.